ဘောလုံးလောကကို စွန့်လွှတ်ဖို့ နီးစပ်ပြီးမှ ကမ္ဘာ့အဆင့်ဂိုးသမားဖြစ်လာသူ အယ်လစ်ဆန်
ဘောလုံးလောကကို စွန့်ခွာလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ ကမ္ဘာ့အဆင့်စာရင်းဝင်ဂိုးသမားဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ Alisson
1 Aug 2018 . 6:18 PM
ဂိုးသမားတစ်ဦးကို ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူတာက ဘောလုံးလောကမှာ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ရပ်ပါ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တုန်းက ပါးမားဂိုးသမား ဘူဖွန် Buffon ကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက ပေါင်(၃၂.၆)သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာက ဂိုးသမားတွေထဲမှာ စံချိန်တင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီမှတ်တမ်းက (၁၆)နှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ မန်စီးတီးဂိုးသမား အီဒါဆင် Ederson က ချိုးဖျက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ (၁)နှစ်အကြာမှာပဲ လီဗာပူးလ် Liverpool အသင်းက ရိုးမားဂိုးသမား အယ်လစ်ဆန် Alisson က ပေါင်(၆၇)သန်းနဲ့ ထပ်ပြီးချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေးပိုင်ရှင် ဂိုးသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အယ်လစ်ဆန်ဟာ အခက်အခဲ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးမှ အခုလိုအနေအထား ရောက်ရှိခဲ့တာပါ။ လက်ရှိ အယ်လစ်ဆန်က အရပ်(၆’၇”)အထိရှိနေပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်လောက်က ပုံစံကိုတွေ့ရင် ပရိသတ်တွေ မှတ်မိမှာတောင် မဟုတ်လောက်ဘူး။
အယ်လစ်ဆန် (၁၅)နှစ်အရွယ်လောက်ကပေါ့၊ သူက အရပ်ပုပု ခပ်၀၀၊ ဘယ်လိုမှကို ဂိုးသမားဆိုက်ဒ် မပေါက်တာပါ။ အဲဒီတုန်းက အယ်လစ်ဆန်ဟာ ဘရာဇီးလ်ကလပ် အင်တာနေစီယွန်နယ် လူငယ်အသင်းမှာ ကစားနေတာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကွတ်ကီးတွေ၊ Soft Drink တွေကို အလွန်အကျူးကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့မိသားစုကလည်း သာမန် လူလတ်တန်းစားတွေဖြစ်တာကြောင့် အယ်လစ်ဆန်ကို ဘောလုံးဆက်မကစားဘဲ ပညာရေးကိုသာ အာရုံစိုက်ဖို့အတွက် ဖိအားပေးပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အယ်လစ်ဆန်ရဲ့ဘ၀ကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေမယ့် ပဲ့ကိုင်ရှင်တစ်ဦး ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။
သူကတော့ အင်တာနေစီယွန်နယ်အသင်းရဲ့ ဂိုးနည်းပြ ဒန်နီယဲလ်ပါဗန် Daniel Pavan ဆိုသူပါပဲ။ ပါဗန်က အယ်လစ်ဆန်ကို အနည်းဆုံး(၁)နှစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အင်တာနေစီယွန်နယ် အကယ်ဒမီမှာ ဆက်ထားဖို့ သူ့မိဘတွေဆီ ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်အပိုင်းအခြားက အယ်လစ်ဆန်ကို အခုလိုအဆင့်အထိရောက်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လစ်ဆန်ရဲ့ လက်ရှိအနေအထားနဲ့ပတ်သကပြီး ပါဗန်က”ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အယ်လစ်ဆန် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တာ၊ အဆိုရင် ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးစာရင်းဝင် အသင်းတစ်သင်းမှာ ကစားခွင့်ရခဲ့တာတွေကို တွေ့ရတော့ ကျွန်တော် တကယ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အယ်လစ်ဆန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးခဲ့ပေမယ့် သူဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ဂိုးသမားဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ (၁)နှစ်လောက်အကြာမှာပဲ သူ့အရပ်က (၆’၅”)အထိ မြင့်မားလာတယ်လို့ သိခဲ့ရပြီး အဲဒီအချိန်ကစလို့ သူ့ရဲ့တိုးတက်မှုက မယုံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်”လို့ပြောကြားခဲ့တယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကံကြမ္မာဆိုတာက ဘယ်သူမှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ မရပါဘူး။ လူတစ်ဦး လက်ရှိအချိန်မှာ ရုန်းကန်နေရပေမယ့် နောက်အနာဂတ်မှာ မထင်မှတ်လောက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တာပဲ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ တကယ်လို့သာ အယ်လစ်ဆန်ရဲ့မိဘတွေ သူတို့သားဖြစ်သူကို ဂိုးသမားမလုပ်ခိုင်းတော့ရင်၊ တကယ်လို့သာ ဒန်နီယဲလ်ပါဗန် လို နည်းပြကောင်းနဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်၊ အယ်လစ်ဆန်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်မှုကို လက်လျှော့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အဆင့် ဂိုးသမားတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ မရှိပါဘူး။
အခု အယ်လစ်ဆန်ဟာ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ ထပ်ပြီး ရင်ဆိုင်ရဦးမှာပါ။ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပိုင်ရှင် ဂိုးသမားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ လျော်ညီတဲ့ စွမ်းဆောင်မှု၊ အောင်မြင်မှုတွေ ဝေးကွာနေတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် တစ်ကျော့ပြန်ဆုဖလားတွေ ပြန်ရနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ အများကြီးထားနေတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဆန္ဒ ပြည့်စေဖို့ ဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန် စသဖြင့်ပေ့ါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့ အယ်လစ်ဆန် အခု စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို ထပ်ပြီး ကျော်လွှားနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . .
Photo:The Sun,independent,Globo Esporte
ဘောလုံးလောကကို စှနျ့ခှာလုနီးပါးဖွဈခဲ့ပွီးမှ ကမ်ဘာ့အဆငျ့စာရငျးဝငျဂိုးသမားဖွဈအောငျ ကွိုးစားခဲ့တဲ့ Alisson
ဂိုးသမားတဈဦးကို ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူတာက ဘောလုံးလောကမှာ ရှားရှားပါးပါးဖွဈရပျပါ။ ၂၀၀၁ ခုနှဈတုနျးက ပါးမားဂိုးသမား ဘူဖှနျ Buffon ကို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးက ပေါငျ(၃၂.၆)သနျးနဲ့ချေါယူခဲ့တာက ဂိုးသမားတှထေဲမှာ စံခြိနျတငျဖွဈခဲ့ပွီး အဲဒီမှတျတမျးက (၁၆)နှဈအထိကွာမွငျ့ခဲ့ပွီးမှ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ မနျစီးတီးဂိုးသမား အီဒါဆငျ Ederson က ခြိုးဖကျြခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ (၁)နှဈအကွာမှာပဲ လီဗာပူးလျ Liverpool အသငျးက ရိုးမားဂိုးသမား အယျလဈဆနျ Alisson က ပေါငျ(၆၇)သနျးနဲ့ ထပျပွီးခြိုးဖကျြနိုငျခဲ့တယျ။ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျ ပွောငျးရှကွေ့ေးပိုငျရှငျ ဂိုးသမားတဈဦးဖွဈခဲ့တဲ့ အယျလဈဆနျဟာ အခကျအခဲ၊ စိနျချေါမှုတှေ အမြားကွီးကို ကြျောဖွတျခဲ့ပွီးမှ အခုလိုအနအေထား ရောကျရှိခဲ့တာပါ။ လကျရှိ အယျလဈဆနျက အရပျ(၆’၇”)အထိရှိနပေမေယျ့ လှနျခဲ့တဲ့(၁၀)နှဈလောကျက ပုံစံကိုတှရေ့ငျ ပရိသတျတှေ မှတျမိမှာတောငျ မဟုတျလောကျဘူး။
အယျလဈဆနျ (၁၅)နှဈအရှယျလောကျကပေါ့၊ သူက အရပျပုပု ခပျ၀၀၊ ဘယျလိုမှကို ဂိုးသမားဆိုကျဒျ မပေါကျတာပါ။ အဲဒီတုနျးက အယျလဈဆနျဟာ ဘရာဇီးလျကလပျ အငျတာနစေီယှနျနယျ လူငယျအသငျးမှာ ကစားနတောပါ။ ငယျငယျတုနျးက ကှတျကီးတှေ၊ Soft Drink တှကေို အလှနျအကြူးကွိုကျနှဈသကျခဲ့တာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျဖှံ့ဖွိုးမှုနှေးကှေးခဲ့ရတယျ။ သူ့ရဲ့မိသားစုကလညျး သာမနျ လူလတျတနျးစားတှဖွေဈတာကွောငျ့ အယျလဈဆနျကို ဘောလုံးဆကျမကစားဘဲ ပညာရေးကိုသာ အာရုံစိုကျဖို့အတှကျ ဖိအားပေးပါတော့တယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ အယျလဈဆနျရဲ့ဘဝကို အပွောငျးအလဲဖွဈစမေယျ့ ပဲ့ကိုငျရှငျတဈဦး ထှကျပျေါလာခဲ့တယျ။
သူကတော့ အငျတာနစေီယှနျနယျအသငျးရဲ့ ဂိုးနညျးပွ ဒနျနီယဲလျပါဗနျ Daniel Pavan ဆိုသူပါပဲ။ ပါဗနျက အယျလဈဆနျကို အနညျးဆုံး(၁)နှဈလောကျပဲဖွဈဖွဈ အငျတာနစေီယှနျနယျ အကယျဒမီမှာ ဆကျထားဖို့ သူ့မိဘတှဆေီ ခှငျ့တောငျးခဲ့ပွီး အဲဒီအခြိနျအပိုငျးအခွားက အယျလဈဆနျကို အခုလိုအဆငျ့အထိရောကျအောငျ ဖနျတီးပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ အယျလဈဆနျရဲ့ လကျရှိအနအေထားနဲ့ပတျသကပွီး ပါဗနျက”ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အယျလဈဆနျ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရခဲ့တာ၊ အဆိုရငျ ကမ်ဘာ့ထိပျသီးစာရငျးဝငျ အသငျးတဈသငျးမှာ ကစားခှငျ့ရခဲ့တာတှကေို တှရေ့တော့ ကြှနျတျော တကယျဝမျးမွောကျဂုဏျယူမိပါတယျ။ ငယျငယျတုနျးက အယျလဈဆနျရဲ့ခန်ဓာကိုယျဖှံ့ဖွိုးမှု နှေးကှေးခဲ့ပမေယျ့ သူဟာ တဈခြိနျခြိနျမှာ ထိပျတနျးအဆငျ့ဂိုးသမားဖွဈလာမယျလို့ ကြှနျတျော ယုံကွညျခဲ့ပါတယျ။ (၁)နှဈလောကျအကွာမှာပဲ သူ့အရပျက (၆’၅”)အထိ မွငျ့မားလာတယျလို့ သိခဲ့ရပွီး အဲဒီအခြိနျကစလို့ သူ့ရဲ့တိုးတကျမှုက မယုံနိုငျလောကျအောငျ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ”လို့ပွောကွားခဲ့တယျ။
လူတဈယောကျရဲ့ ကံကွမ်မာဆိုတာက ဘယျသူမှ ကွိုတငျခနျ့မှနျးလို့ မရပါဘူး။ လူတဈဦး လကျရှိအခြိနျမှာ ရုနျးကနျနရေပမေယျ့ နောကျအနာဂတျမှာ မထငျမှတျလောကျတဲ့ အခွအေနတေဈခုကို ရောကျခငျြရောကျသှားနိုငျတာပဲ။ တဈခုတော့ရှိတယျ၊ ကွိုးစားအားထုတျမှု၊ ဇှဲ၊ လုံ့လ၊ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ပွငျးထနျဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ တကယျလို့သာ အယျလဈဆနျရဲ့မိဘတှေ သူတို့သားဖွဈသူကို ဂိုးသမားမလုပျခိုငျးတော့ရငျ၊ တကယျလို့သာ ဒနျနီယဲလျပါဗနျ လို နညျးပွကောငျးနဲ့မတှခေဲ့ရငျ၊ အယျလဈဆနျကိုယျတိုငျကလညျး ကိုယျ့ယုံကွညျခကျြမှုကို လကျလြှော့ခဲ့မယျဆိုရငျ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ဂိုးသမားတဈဦးဖွဈလာဖို့ မရှိပါဘူး။
အခု အယျလဈဆနျဟာ စိနျချေါမှုအသဈတှနေဲ့ ထပျပွီး ရငျဆိုငျရဦးမှာပါ။ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးပိုငျရှငျ ဂိုးသမားဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျနဲ့ လြျောညီတဲ့ စှမျးဆောငျမှု၊ အောငျမွငျမှုတှေ ဝေးကှာနတေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ တဈကြော့ပွနျဆုဖလားတှေ ပွနျရနိုငျအောငျ စှမျးဆောငျပေးရမယျ့တာဝနျ၊ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အမြားကွီးထားနတေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ဆန်ဒ ပွညျ့စဖေို့ ဆောငျရှကျရမယျ့တာဝနျ စသဖွငျ့ပေ့ါ။ ငယျငယျကတညျးက စိတျဓာတျပွငျးထနျတဲ့ အယျလဈဆနျ အခု စိနျချေါမှုအသဈတှကေို ထပျပွီး ကြျောလှားနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . .